Uyenza njani into yokuzoba kwiFotohop inyathelo ngenyathelo | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Uyenza njani into yokuzoba kwiFotohop
Lola ifani | 09/06/2021 10:59 | Izixhobo zoYilo, Photoshop, Tutorials
Ifotohop yiyo sisixhobo esikhulu sokunika ubugcisa bokubamba kwiifoto zakho. Kule tutorial siza kukuxelela indlela yokutshintsha ifoto ibe ngumzobo wokwenyani. Kulula kakhulu! Ukuba ufuna ukwazi Uyenza njani into yokuzoba kwiFotohop, ungaphoswa yile post.
1 Vula umfanekiso kwaye uphinde umxholo ongasemva
2 Uluhlu lwedatate 1 kwaye wenze umaleko 2
3 Faka isicelo sokucoca ulwelo lwaseGaussian
4 Ukuchukumisa kokugqibela ngesixhobo seBurn
Vula umfanekiso kwaye uphinde umxholo ongasemva
Into yokuqala esiza kuyenza yile vula ifoto esifuna ukuyihlela Kwi-Photoshop, ungatsala ifayile kwaye iya kuvuleka ngokuzenzekelayo. Uluhlu olusezantsi ngu sizakuphindaphindaUkwenza oku, yiya kwi "layer" tab kwimenyu ephezulu kwaye ucofe ku "duplicate layer". Siza kunika ikopi igama lika "Ulwaleko 1".
Uluhlu lwedatate 1 kwaye wenze umaleko 2
Siyayifuna "Ulwaleko 1" ngombala omnyama nomhlophe. Ukwenza oku, khetha, yiya kwi "image" tab kwimenyu ephezulu, "useto" kwaye ucofe ku "desaturate". Ngoku siza kuya maleko "ophindwe kabini"Ikopi esiyibiza ngokuba yi "layer 2" siya kuyinika igama. Emva koko siya kuguqula imibala yoluhlu olutsha, ukulungiselela oku Uhlobo lomyalelo + ulawulo lwe-io (Mac) + i (Windows). Xa unomfanekiso ongathandekiyo, tshintsha imo yokudibanisa. Ungayenza kwimenyu eboniswe kumfanekiso ongentla, khetha umbala wedodge ukhetho. Lo mfanekiso uya kungabinanto kwaphela, kodwa ungakhathazeki, masiyilungise!
Faka isicelo sokucoca ulwelo lwaseGaussian
Kulo "Ulwaleko 2" siya kufaka isicelo hluza isihluzo. Yiya kwithebhu "isihluzo" Kwimenyu ephezulu, cofa "Blur" kwaye ukhethe "ukufiphala kweGaussia". Ifestile encinci iya kuvula apho unako Guqula amaxabiso unomathotholo. Ixabiso eliphezulu olinike lona, ​​inqanaba elithe kratya lomzobo liya kuba nalo. Ke Ndikhetha ukuwushiya ngakumbi ngasekhohlo, ngo-8, ukomeleza isiphumo somzobo wepensile.
Ukuchukumisa kokugqibela ngesixhobo seBurn
Oko sele sijongeka njengokuzoba, kodwa masihambe inyathelo elinye ukuya phambili ukwenza iziphumo zibe ngcono. Kwibar yesixhobo siza kuyifumana Tshisa isixhobo. Kwimenyu yezixhobo onokukhetha kuzo unokutshintsha uhlobo kunye nobungakanani bebrashi kwaye uhlengahlengise inqanaba lokuvezwa. Ndikucebisa ukuba ukhethe ifayile ye- isasaza ibrashi setyhula, inkulu kwaye ugcine Ukuvezwa ukusuka kuma-20 ukuya kuma-25%. Ngoku masenze peyinta iindawo ezithile zomfanekiso, Ngale nto siza kufumana i- Isiphumo eya kuphucula ukubonakala komzobo. Ndipeyinte indawo yeenwele, impumlo, amehlo, isilevu Ucinga ntoni ngesiphumo sokugqibela? Ukuba ufuna ukuqhubeka nokufunda amaqhinga okunika ubugcisa bokufota kwiifoto zakho, ungabona isifundo sethu Ungazifaka njani iifilitha ezikwi-Photoshop.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » Izixhobo zoYilo » Uyenza njani into yokuzoba kwiFotohop
Uyenza njani i-gif kwividiyo
Iikhosi ezili-10 ezilungileyo zeAdobe Illustrator kwi-Intanethi